टिकटकको हार्डवेयर- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २४, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
टिकटकको स्वामित्व रहेको चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले हार्डवेयर उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ  । छोटो भिडियो सेयरिङ गर्ने एप टिकटक फरक विशेषताका कारण चर्चित छ  ।
नेपाल, भारतसहित एसियाली मुलुकमा टिकटकले सन् २०१८ यता करोडौं प्रयोगकर्ता कमाएको छ ।
बाइटडान्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षाप्रद हार्डवेयर सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको भए पनि थप केही खुलाइएको छैन । उसको यो घोषणालाई धेरैले स्मार्टफोन वा कम्प्युटर हार्डवेयरमा हात हाल्न खोजेको भनी बुझेका छन् । ७५ अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यांकन गरिएको बाइटडान्स संसारको सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक स्टार्टअप कम्पनी हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ११:०१
दुःखीहरूको कथा किन रोएर सुनाउने ?
'बहुसंख्यक दर्शकले सुखद अन्त्य नै खोज्छ भन्दैमा त्यतै दौडिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन ।'
जेष्ठ २४, २०७६ सुशील पौडेल
रिलिजको झन्डै तीन वर्षपछि जात्रा फिल्मको सिक्वेलका रूपमा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले जात्रैजात्रा ल्याएका छन्  । प्रदर्शनीको तीन हप्ता पार गर्दा पनि जात्रैजात्रा हेर्न दर्शकको हलमा जात्रा कायमै छ  ।
पछिल्लो समय नेपालमा कमेडी फिल्मले दर्शकको साथ पाइरहेका छन् । जात्रा र शत्रु गते पनि कमेडी जनरामै बनाएका निर्देशक भट्टराईले जात्रैजात्रालाई पनि कमेडीकै स्वादमा तयार पारे । विषयवस्तु गम्भीर हुँदाहुँदै पनि प्रस्तुतीकरण किन कमेडी गर्नुपर्‍यो त ? उनी भन्छन्, हो, ‘जात्रैजात्रा पूरै रोनाधोना बनाएको भए पनि हुन्थ्यो । किनभने दुःखी आत्माहरूको कथा छ । हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो होला । तर दुःखीहरूको कथा किन रोएर सुनाउने ? हाँसेर किन नसुनाउने भन्ने लाग्यो ।’ उनले देशमा यसै पनि विभिन्न कारणले दुःखीहरू धेरै भएका बेला कम्तीमा उनीहरू फिल्म हेरेर आफ्नाभन्दा ठूला दुःख अरूका देखेर खुसी होऊन् न भन्ने मनसाय राखेको बताए ।
त्यसो त निर्देशक भट्टराई आफ्नो फिल्मलाई कमेडी मात्रै भन्न रुचाउँदैनन् । फिल्ममा पात्र दुःखमा पर्दा दर्शक हाँस्छन् । तर यसलाई उनी डार्क कमेडी पनि भनिहाल्दैनन् । किन त ? ‘डार्क कमेडी यथार्थपरक नहुन पनि सक्छ । तर जात्रैजात्रामा हावा कमेडीभन्दा पनि तर्कसंगत कमेडी छ,’ उनी यस्ता फिल्म टिम राम्रो भएन भने बिग्रने सम्भावना हुने जोखिम पनि देख्छन् । प्रश्नमाथि प्रश्न गर्ने, तर्क गर्ने, झगडा गर्ने राम्रो टिम भएन भने उब्जेका प्रश्नप्रति जवाफदेही हुने हल खोज्न गाह्रो हुने भट्टराईको ठम्याइ रहेछ ।
त्यसैले जात्रैजात्रालाई दर्शकले राम्रो साथ दिइरहेका छन् । अझ परिवार नै हूल बाँधेर आएको देख्दा भने छक्क छन्, निर्देशक । ‘रोनाधोना र पारिवारिक फिल्म नभएकाले पनि परिवार नै हूल बाँधेर फिल्म हेर्न आउनुहोला भन्ने त हामीले सोचेका पनि थिएनौं,’ उनले भने । समीक्षासमेत तारिफयोग्य आएपछि पुलकित भएका भट्टराईलाई जात्राको सिक्वेल बनाउन सहज भने थिएन । मुख्य पात्र जेल गएका थिए । दुई करोड ८० लाख रुपैयाँको हिसाब देखिएको थिएन । यी यावत् कुराको उत्तरमा केही नयाँ कथा मिसाउनु साँच्चै गाह्रो काम थियो ।
‘यति धेरै आइडियामाथि काम गरियो । डेढ वर्ष जहाँ गए पनि यसैमा दिमाग घोटायौं । सुनको काण्ड र पैसाको मुद्दालाई जोड्न समय लाग्यो,’ निर्देशकले भने, ‘धेरै आइडिया फालिए । पैसा भाग लगाउनुपर्छ भनेर फणीन्द्रले योजना बुनेर सम्पुलाई सबै पैसा दिएर पोइला भगाउन लगाएको थियो । पछि सम्पु साँच्चैको पोइला गइदिन्छे । पैसासँगै पत्नी पनि गुमेपछि फणीन्द्रको जीवन जात्रैजात्रा हुन्थ्यो । यस्ता थुप्रै आइडिया आएका थिए । तर सिक्वेल बनाउन र कमेडीमा तर्क खोज्ने चक्करमा निकै समय लाग्यो ।’ जात्राको सिक्वेलका कारण पनि दर्शकमा यति धेरै अपेक्षा थियो कि उही मेसीले दुई, तीन गोल नहाने राम्रै खेलेन भन्ने परेजस्तो हुन्थ्यो यो टिमलाई पनि ।
दुःखद अन्त्यमा सकिएको जात्राको सिक्वेलले अहिले सुखद अन्त्यसहित बिट मारेको छ । फिल्मप्रतिको दर्शक हेराइ यसको अन्त्यमा पनि निर्भर हुने कुरा अहिले आएर निर्देशक भट्टराईले बुझ्न पाए । भने, ‘फिल्म हेरेर दर्शक खुसी भएरै निस्कन चाहनु हुँदोरहेछ । हिरो, हिरो नै देखिनुपर्छ । जे जस्तो भए पनि राम्रो मान्छेले अन्त्यमा सुख र न्याय पाउनै पर्छ । जात्राको अन्त्यमा मुख्य तीन पात्र जेल जानुपर्दा धेरै दर्शक निराश हुनुभएको थियो । त्यसैले पनि यसपालि दिमागै चलाएर सुखद समापन गरेका हौं ।’
तर दुःखान्त अन्त्य हुनै हुँदैन, दर्शकले रुचाउँदै नरुचाउने भन्ने पनि ठान्दैनन् उनी । ‘पशुपतिप्रसादको त्यही अन्त्य नै दर्शकलाई खुब मनपर्‍यो । जात्राकै पनि कतिपयले रुचाउनुभएको छ । उहाँहरूले जात्रालाई दिमागले हलबाट घरसम्म लग्यो भन्नुहुन्थ्यो । बहुसंख्यक दर्शकले सुखद अन्त्य नै खोज्छ भन्दैमा हामी पनि त्यतै दौडिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन ।’पोखरामा जाँदा एक दर्शकले जात्रैजात्रा कमेडी फिल्म नै हैन भनेछन्, प्रदीपलाई । कारणमा ती दर्शकले भनेछन्, ‘पात्र जीवनसँग नजिक छ र उसको दुर्दशामा दर्शकको हाँसो छुट्यो भन्दैमा फिल्म कमेडी हैन । बरु दर्शक कमेडी हुन् ।’ लेखकसमेत रहेका भट्टराईलाई पनि त्यस्तै हो भन्ने लागेको छ । ‘हामीले पनि दर्शकलाई हँसाउनकै लागि भनेर एउटै संवाद पनि थोपरेका थिएनौं । तर्कसंगत कमेडीमा पनि जबर्जस्ती कमेडी गरेको नलागोस् भन्नेमा हामी सचेत थियौं,’ उनको ध्याउन्न दर्शक हाँसुन् भन्ने सधैं रहन्छ । फिल्मका कार्यकारी निर्मातासमेत रहेका जोयश भाइ उर्फ रवीन्द्रसिंह बानियाँले निर्देशकका बारेमा भने, ‘उहाँको खुबी भनेकै गहिरो कुरालाई पनि कमेडीमार्फत दर्शकलाई चखाउने हो । कमेडी दिने तर औषधि हालेर । जात्रैजात्राको पनि आवरणमा मात्रै कमेडी हो । भित्र त पात्रका दुःख नै छन् ।’
कमाइका सात सूत्र
क्ले कोर्टका राजा